Thursday February 13, 2020 - 12:32:19 in Wararka by
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo deegaanno xuduud beenaadka kulaala ku dhaxmaray maleeshiyaadka Liyuu Booliska iyo ciidamada Xabashida Itoobiya.
Ugu yaraan 11 qof oo dhinacyadii dagaallamay ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalka oo ka dhacay deegaan qiyaastii 50 KM ujira tuulada Farlibaax ee gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo baxsad Itoobiyaan ah oo ka yimid dhanka degmada Xudur ay weerar kala kulmeen maleeshiyaadka Liyuu Booliska oo ku sugnaa xuduud beenaadka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay 7 askari Itoobiyaan ah iyo 4 kamid ah maleeshiyaadka Liyuu Booliska, sababta dagaalka keentay ayaa lagu sheegay in kadib markii taliyaha ciidamada Itoobiya ee Xudur uu amar kusiiyay Liyuu Booliska in ay laayaan ama ay qabqabtaan ciidamada baxsadka u ah dhanka Itoobiya.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamo Itoobiyaan gadood ah ay maalin ka hor kasoo baxsadeen magaalada Xudur waxayna lug ku gaareen halka ay iska galaan gobollada Hiiraan iyo Bakool iyagoo damacsanaa in ay galeen Soomaaligalbeed kadibna ay Itoobiya usii gudbaan.
Melleteriga Itoobiya waxaa udegsan xeer ah in lalaayo askarta amar diidada ku dhaqaaqday taas ayaana keentay in Maleeshiyaadka Liyuu Booliska lagu amro in ay laayaan askarta baxsadka ah.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay xoogaga Al Shabaab sidaan oo kale askar Itoobiyaan baxsad ahaa ugu dileen duleedka degmada Waajid ee isla gobolka Bakool, ciidamada Xabashida oo muddo 8 sana ah lagu dhiig bixinayo dagaalka Soomaaliya ayaa bilaabay baxsad arrinkaas oo banaanka soo dhigaya guuldarrada shisheeyaha.